Daaweynta Proton ee Kansarrada caloosha - Proton California
La dagaallanka Kansarka Caloosha
Daaweynta Proton ee Kansarka Caloosha
Farsamaynta iskaanka teknoolojiyada ee tijaabada shucaaca ee California Protons waa qaab aad u sax ah oo daaweynta shucaaca kansarka u saamaxaya dhakhaatiirteena inay si aad ah u bartilmaameedsadaan burooyinka caloosha iyo mindhicirka ee laga helo meelaha aadka u culus iyo xasaasiga ah ee habka dheef-shiidka oo leh shucaaca sare.
Marka la barbar dhigo daaweynta daweynta ee wadnaha firfircoon ee duugga ah, teknoolajiyada baarista qalin-jabinta waxay si sax ah u siineysaa daaweynta shucaaca caloosha, malawadka, dabada, xiidanka iyo burooyinka kale ee hooseeya ee GI gudaha 2 milimitir iyo daryeelka ugu weyn. Waxaan ku weeraraynaa lakabka burooyinka lakab waxaanna yareynaynaa ugaarsiga waxyeelada unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha jirka. Tani waa muhiim maadaama burooyinka caloosha iyo maqaarka ay caadi ahaan u baahan yihiin qaadasho kacsi badan oo shucaac waxayna ku yaalliin unugyo caafimaad qaba iyo xubnaha oo aad ugu nugul shucaaca. Yaraynta sunta shucaaca la xiriirta shucaaca waxay yareyneysaa waxyeelooyinka shucaaca waxayna sidoo kale kordhineysaa suurtagalnimada in bukaanku ku dhammaystiri karaan daaweynta iyadoo ay yaraaneyso carqalado ama daahitaan.
Kansarka calool xanuunka
Calool xanuun ama kansarka caloosha
Xulo kansarka soo noqnoqda iyo kansarka metastatic
Ka ilaali kaadiheystaada, xiidmaha yar yar iyo weyn, caloosha, kelyaha, xubnaha galmada iyo xangullaha
Iska yaree dhibaatooyinka soo raaca ee daaweynta shucaaca, oo ay ku jiraan lallabbo, matag, wadno xanuun, casiraad, malaariyada (awood u laheyn nuugista nafaqada cuntada), shuban, fuuq-bax iyo kacsi galmo.
Faa'iidooyinka Daaweynta Proton ee Kansarka Caloosha
Daaweynta proton-ka ee horumarsan waxay u oggolaaneysaa dhakhaatiirta inay si aad ah u doortaan shucaac heer sare ah burooyinka maqaarka iyo unugyada kansarka ee laga helo habka dheef-shiidka, oo ay u yareeyaan qiyaasta unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha muhiimka ah ee ku xeeran. Xaaladaha qaarkood, tan waxaa loo muujiyey inay gaarsiiso heerar ka sarreeya daawaynta shucaaca xitaa marka lagu jiro xaaladaha ugu adag.
Sababtoo ah daaweynta proton waxay sifiican ugu nuuxnuuxsan kartaa qiyaasta shucaaca bartilmaameedka iyo xaddidaadda meelo kale, dhakhaatiirtu waxay yareyn karaan shucaaca unugyada caafimaadka qaba agagaarka burooyinka taas oo saameyn ku yeelan karta awooddaada dheefshiidka iyo dheef-shiid kiimikaadka iyo ka takhalusidda nidaamkaaga qashinka.
Farsamooyinka takhasuska leh waxaa loo isticmaali karaa daaweynta proton-ka si loogu bar tilmaameedsado burada soo socota leh saxsanaanta farsamo ee weyn. Tani waxay muhiim u tahay bukaanka kansarka caloosha iyo mindhicirka ee lagu daaweeyo kansarka caloosha.
Daaweynta isku-darka ah ee qalliinka, kemotherabi iyo shucaac waxay noqdeen daaweynta caadiga ah ee inta badan kansarka caloosha. Iyada oo ku xidhan marxaladda, goobta iyo nooca kansarka, ikhtiyaarada daweynta iyo halista waxyeelooyinka way kala duwanaan karaan. Fursadaha daaweynta ayaa sidoo kale saameeya da'da, caafimaadka guud iyo doorbidyada shaqsiyadeed.
Sidoo kale loo yaqaan kansarka gaaska, kansarka caloosha ayaa ku dhaca caloosha waxaana lagu cabiraa sida qotodheer ee kansarku ugu faafay 5 lakab ee darbiga caloosha iyo haddii uu cudur ku faafay qanjidhada ku xigta. Kansarka caloosha ayaa mararka qaarkood u baahan daweynta shucaaca ka dib qalitaanka. Waxay kuxirantahay marxaladda burada, xaalada guud ahaaneed ee bukaanka iyo heerka qalliinka, daaweynta proton waxaa lagu siin karaa isla waqtiga kemotherapy.
Kansarka noocan ahi wuxuu saameeyaa qaybo ka mid ah xiidmaha waaweyn. Iyada oo ku xidhan marxaladda kansarka, daaweynta shucaaca ee kansarka noocan ah ayaa badanaa la bixiyaa ka hor ama ka dib qalliinka. Haddii kansarku si ballaaran ugu faafay derbiga xiidanka, daaweynta proton waxaa loo isticmaali karaa in lagu yareeyo burooyinka si aad ah u dhaafay darbiga futada ama xakameynta xanuunka.
Kansarka sanka caadi ahaan waa kansar unugyada squamous ah oo ka soo baxa gudaha bannaanka hore ee marinka caloosha. Noocan ah kansarka waxaa badanaa lagu daaweeyaa daaweynta shucaaca iyadoo isla mar ahaantaana lagu daaweeyo kemotherabi. Sababtoo ah meesha ay ku taal, kemotherabi waa xulashada daaweynta koowaad, halkii qalliinka, iyo daaweynta proton waxay bixin kartaa daaweyn sunta shucaaca ka yareyn karta waxyeelada iyo waxyeelada unugyada ku hareereysan.
Kansarka mindhicirka wuxuu ku samaysmaa xiidmahaaga weyn. Qalliinka waa daaweynta ugu caamsan, gaar ahaan marxaladda I iyo II marka kansarku uusan weli sii faafin. Chemotherapy sidoo kale waxaa lagula talinayaa heerar sare oo kansar ah. Daaweynta 'Proton therapy' sidoo kale waxaa lagu talin karaa inay gacan ka geysato xakameynta kansarka.
Daweynta aagagga aan horay loo arag waxay noqon karaan wax dhib badan, gaar ahaan aagga caloosha. Wareega labaad ee daaweynta shucaaca raajada ayaa noqon kara mid aad u qatar ah maadaama unugyada caafimaadka qaba ee ku dhaca burooyinka soo noqnoqda aysan “ilaawin” qiyaasta hore ee shucaaca, iyo qiyaasta kasta oo lagu daro waxay sii kordhineysaa halista dhaawaca unugyada caadiga ah. Daaweynta loo yaqaan 'proton beam therapy' ayaa laga yaabaa inay awood u siiso dhakhaatiirta inay sifiican uga fiirsadaan qiyaasta bartilmaameedka oo ay ku xaddidaan meel kale, iyagoo u oggolaanaya dib-ugu-daweynta shucaaca bukaanka la xushay.
Daaweynta daaweynta Proton-ka ee Xarunta Daaweynta Kansarka ee Protons ee San Diego waxay soo bandhigi kartaa natiijooyin la mid ah tan shucaaca-raajada caadiga ah, iyadoo la yareynayo waxyeelooyinka muddada-dheer iyo nolosha ee halista ah sida boogaha, dhiig-baxa iyo dhiig-baxa gudaha sababo la xiriira dhaawaca shucaaca ee dheef-shiidka. marinka iyo miskaha Waxay kaloo yareyn kartaa fursadaha kansarrada sare nolosha dambe sababa la xiriira shucaaca oo yaraada u soo bixista unugyada caafimaadka qaba ee ku xeeran iyo xubnaha.
Daraasadaha Cilmi-baarista ee Taageera Daaweynta Proton-ka ee Kansarka Caloosha
Qiyaasta sare ee proton beam radiotherapy ee hepatocellular carcinoma: natiijooyinka horudhaca ah ee tijaabada wejiga II